Shiinuhu Sababta uu u noqday cadawga 1-aad ee Mareykanka – Banaadir Times
By banaadir 4th December 2020 122 No comment
John Ratcliffe oo ah sarkaalka ugu sarreeya Sirdoonka Mareykanka oo Warbixin siiyay Wargeyska Wall Street Journal waxa uu daaha ka qaaday sababta Shiinaha uu u noqday cadawga koowaad ee Mareykanka.
Qoraalka uu daabacay John oo aad u dheeraa waxa uu dul istaagay ogaantiisa & macluumaadka kale uu hayo ee sababta ka dambeysa in Xukuumadda Washington ay u colaadiso isla markaana isaga ilaaliso Xukuumadda Beijing.
Sarkaalka ugu sarreeya Sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay in Shiinuhu uu xaday xog dalkisa uu leeyahay, isla markaana uu adeegsaday, sidaasna uu suuqa uga saaray Shirkadaha Mareykanka sida uu hadalka u dhigay.
John Lee Ratcliffe Madaxa Sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay in go’aanka adage ee Madaxweyne Trump kordhinta Canshuurta Badeecadaha Shiinaha lagu xakameynayay xaditaanka xogta dalkaas.
Dowladda Shiinaha ayuu ku eedeeyay in ay aad ugu dadaaleyso kobcinta horumarka dhanka Shirkadaha si ay meesha uga saarto kuwa Mareykanka oo marka la eego tartanka waxsoosaarka u arka in ay suuqa ku cariiri karaan, taasina ay dhintay awoodda Shirkadaha Mareykanka.
“Beijing waxa ay isu diyaarinaysaaa in ay abaabusho dagaal ka dhan ah Mareykanka oo dhanka dhaqaalaha & maamulka Dunida inteeda kale ah, waxa ay hormarin ku wadaa dhinacyada waxsoosaarka, Militariga, Teknoolajiyadda iyo meel waliba oo ay u aragto xoojinta yoolkeeda” Sidaasi waxaa yiri Madaxda Sirdoonka Qaranka Mareykanka John Lee Ratcliffe.
Mareykanka & Shiinaha oo qaanad uga wada jira Shanta dal ee codka diidmada qeyaxan ee Golaha Ammaanka ayaa dedaal xooggan gelinaya dhinacyada Ganacsiga, Militariga & Teknoolajiyadda si dhanba dhanka kale uu uga gacan sare maro maamulka dunida inteeda kale.
Qoor-Qoor oo 19-Cishe ku howlan isu soo dhaweynta DFS & Musharixiinta isku qabtay Guddiga Doorashada 20/21.